Jamaica Tourism Minister: Redouble efforts to facilitate speedy global recovery |
Bogga ugu weyn » Wararka Booqashada Caalamiga ah » Wararka safarka Jamaica » Wasiirka Dalxiiska Jamaica: Dadaalka labanlaabmay si loo fududeeyo soo kabashada degdegga ah ee adduunka
Wasiirka Dalxiiska Jamaica: Dadaalka labanlaabmay si loo fududeeyo soo kabashada degdegga ah ee adduunka
Wasiirka Dalxiiska Jamaica, Mudane. Edmund Bartlett, wuxuu ugu baaqayaa daneeyayaasha dalxiiska adduunka iyo kuwa gobolka inay laban laabaan dadaalkooda si loo fududeeyo soo kabashada degdegga ah ee warshadaha dalxiiska caalamiga iyo iyadoo la sii dheereeyo dhaqaalaha adduunka.
Wasiir Bartlett wuxuu ku dhawaaqay baaqa ka yimid gudiga UNWTO ee Qaarada Ameerika oo maanta lagu qabtay Jamaica.
Rasiidhada caalamiga ah ee dalxiiska ee sannadka 2020 ayaa hoos u dhacay 64 boqolkiiba marka la eego dhab ahaan, una dhiganta hoos u dhac ka badan US $ 900 bilyan.
Wadarta khasaarihii ka soo xarooday dakhliyadii dhoofinta ee dalxiiskii caalamiga ahaa waxay gaarayeen ku dhowaad US $ 1.1 trillion.
Wasiirka Dalxiiska Jamaica Bartlett ayaa soo wacay isaga oo gudoominaya qaab isku dhafka ah ee Hay'ada Qaramada Midoobay ee Dalxiiska Adduunka (UNWTO) ee 66-aad ee Gobollada Ameerika (CAM), maanta (24-ka Juun).
Wasiirka Dalxiiska Sacuudi Carabiya, Mudane Axmed Al Khateeb, iyo Wasiirka Dalxiiska iyo Gaadiidka Caalamiga ee Barbados, Senator, Mudane. Lisa Cummins, waxay ka mid yihiin hoggaamiyeyaasha dalxiiska adduunka ee u safray Jamaica si ay uga qayb galaan kulanka CAM. Senator Cummins wuxuu kaloo gudoomiye ka yahay Ururka Dalxiiska Caribbean-ka (CTO). Saraakiisha dalxiiska ayaa sidoo kale ka qaybgalay Wadahadalka Wasiiradda ee ku saabsan dib u soo noolaynta waaxda dalxiiska si loo helo koritaan loo wada dhan yahay.
Dalxiiska Jamaica Wasiirka Bartlett wuxuu carabka ku adkeeyay in "rasiidhada caalamiga ah ee dalxiiska sanadka 2020 ay hoos udhaceen 64 boqolkiiba marka loo eego xaqiiqda dhabta ah, oo u dhiganta hoos udhaca in kabadan US $ 900 bilyan, halka wadarta qasaaraha dakhliga dhoofinta ee dalxiiska caalamiga uu gaarayo kudhowaad US $ 1.1 trillion."
Wuxuu intaas ku daray "Saamaynta COVID-19 ee waaxda dalxiiska Jamaica ee Ameerika waxay aragtay hoos u dhac 68 boqolkiiba ah ee soo-booqdayaasha caalamiga ah ee yimid sannadka 2020, iyadoo laga diiwaan-geliyay 70 milyan hoos uga dhacday 219 milyan oo la diiwaan-galiyay sannadka 2019-ka." Wuxuu wax laga xumaado ku tilmaamay sida ku xusan warbixintii sagaalaad ee UNWTO ee xayiraadaha safarka, 10 meelood oo laga tago Ameerika, ama 20 boqolkiiba dhammaan aagagga gobolka, ay gebi ahaanba xireen xuduudihooda laga bilaabo Febraayo 1, 2021, iyada oo hoos u dhac ku yimi isu socodka hawada.
In kasta oo aan rajeynayno isbeddello wax ku ool ah oo horay loogu sii socdo ayaa Wasiirka Dalxiiska Jamaic Mr. Bartlett waxa uu carabka ku adkeeyay in "baaqa hadda, uu yahay in aan labalaabno dadaalkeenna ku aaddan in aan si wadajir ah uga wada shaqeyno qaabab macquul ah oo macno leh oo ku aaddan soo noqoshada maalmihii guulaha ee safarka iyo dalxiiska." Wuxuu yidhi, “Waxaan rajaynayaa in hal natiijo oo kulankan ka mid ah, oo uu ka mid yahay Wadahadalka Wasiirku, aanu noqon doonin oo keliya ku celcelinta ballanqaadkeenna iyo rabitaankeenna siyaasadeed laakiin ugu yaraan hal tallaabo la taaban karo oo uu gobolku wada qaadi karo si dib loogu hawlgaliyo dalxiiska.”
Xoghayaha guud ee UNWTO, Mr. Zurab Pololikashvili, isagoo hoosta ka xarriiqaya baahida loo qabo in la dadajiyo soo kabashada waaxda dalxiiska ayaa yiri “cidna ugama tagi karno howshan is Waqtigu waa muhiim, qoysas badan gaar ahaan kuwa Caribbean-ka ma haystaan hab kale oo tan looga bixi karo. Iyaga ayaa ah isha ugu weyn ee ay dakhli ka helaan dad badana iyo carruur badan iyo qoysas badan ayaa ku tiirsan dakhligan. ”
Wasiir Al Khateeb wuxuu hoosta ka xariiqay baahida loo qabo wadashaqeyn ballaaran oo ka dhan ah la dagaallanka cudurka faafa ee COVID-19. "Tani waa dhibaato caalami ah, xalkuna waa inuu ka yimaadaa qof walba sidaas darteed waa inaan iska kaashano waana inaan iska kaashano," ayuu yiri. Wuxuu sidoo kale ku baaqay borotokollo cadcad oo mideysan si loo fududeeyo dib u soo celinta waaxda dalxiiska.